Kooxaha Elman iyo Dekedda oo barbaro ku kala baxay kulan qeyb ka ah horyaalka Somali Premier League… + SAWIRRO – Gool FM
Kooxaha Elman iyo Dekedda oo barbaro ku kala baxay kulan qeyb ka ah horyaalka Somali Premier League… + SAWIRRO
Haaruun May 31, 2021
(Muqdisho) 31 Maajo 2021. Kooxaha Elman iyo Dekedda ayaa barbaro ku kala baxay kulan qeyb ka ah horyaalka Somali Premier League, kaasoo galabta ka dhacay Tuulada ciyaaraha dalka ee Stadium Mugadishu.
Inta aysan ciyaartu bilaaban waxaa baroordiiq loo sameeyey xoghayihii hore ee xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Xasan Fareey oo dhowaan ku geeriyooday Muqdisho.
Bilowgii ciyaarta oo mareysa daqiiqaddii 10-aad waxaa kulan gool kulaad ka khasaariyey kooxda Dekedda ciyaaryahan Anwar Shakunda, taasoo farxad u ahayd kooxdiisii hore ee Elman oo goolka lagu bilaabi karay.
Intaasi kaddib Kooxda Elman ayaa hoggaanka ciyaarta la wareegtay markii 27’daqiiqo uu Mohamed Kylan oo ka tirsan Elman gool ugu shubay Dekedda, ciyaarta ayaana lagu kala nastay 1-0 ay ku gacan sarreysay kooxda Jaalleyaasha ee Elman.
Qeybtii labaad ee ciyaarta markii dib la isugu soo laabtay Kooxda Dekedda ayaa awood u yeelatay inay iska soo barbareyso goolkaas, waxaana gool cajiib ahaa dhaliyey xiddiga reer Nigeria ee Emeka, ciyaarta ayaana gar isku mid ah ku soo laabatay.
Kooxda Dekedda ayaa haatan ku jirta kaalinta lixaad ee kala sarreynta horyaalka Somali Premier League, waxaana ay leedahay 12-dhibcood, halka Elman oo fadhisa kaalinta siddeedaad ay leedahay 11-dhibcood.
Sawirrada waxaa soo qaaday Sharmaarke C/llaahi oo ka tirsan GOOL FM.
RASMI: Dalka lagu ciyaari doono Copa America 2021 oo la shaaciyey kaddib markii marti-gelintiisa laga wareejiyey Argentina & Colombia
Eden Hazard oo kala cadeeyay haddii uu ku laabanayo Chelsea ama uu sii joogi doono Real Madrid